Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi, impilo enamandla kaSira Quiroga | Izincwadi Zamanje
Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi (2009) yinoveli yombhali waseSpain uMaría Dueñas. Kuyindaba elotshwe kahle kakhulu ngempilo enempilo kaSira Quiroga, umthungi wezingubo osemncane owashiya iMadrid ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kweMpi Yombango. Okwamanje, kumfundi, indlela yombhali yokuthola umlando obucayi eSpain naseYurophu iyaveza.
Ngalesi sizathu, lencwadi inokubaluleka okungenakuphikwa njengobufakazi balesosikhathi (ngaphandle kwephupho elidlulisayo). Sekukonke, icebo lothando nobuhlungu, kanye nencazelo yeqiniso laleso sikhathi ngokulandelana okucebile futhi okuthakazelisayo, kwenze kube omunye wemisebenzi evelele kakhulu ebhalwe ngolimi lwaseSpain lweminyaka eyinkulungwane entsha.
1 Isifinyezo se-The Time Between Seams
1.2 Ukuvuka kabusha
2 Ukuhlaziywa ngesikhathi esiphakathi kwemikhawulo
2.1 Inoveli eyiqiniso yomlando
2.2 Ingqikithi ebalulekile kule noveli
2.3 Ukulungiswa kwethelevishini
2.3.1 Ukuqala kwe-franchise?
3 Mayelana nomlobi, uMaría Dueñas
3.1 Umthelela weThe Time Between Seams
3.2 Ezinye izincwadi zikaMaría Dueñas
Isifinyezo se- Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi
USira Quiroga ngumthungi wezingubo osemncane futhi othandekayo owathola ifa elibalulekile kuyise, otusa ngonya ukuthi abaleke eSpain. Ukudlula kweminyaka engama-30, ngosuku olwandulela iMpi Yombango, uSira uyaluzwa udlame oluthinta imvelo. Ngaphezu kwalokho, le ntokazi isithandana noRamiro, yize ethatha isinqumo sokuthuthela enhlokodolobha yaseMorocco.
Ngenxa yezizathu ezishiwo, intombazane iya eTangier ilandela indlela yesithandwa sayo. Kodwa-ke, izibalo zabo azivelanga ngaphambi kokuqagela, ukukhohlisa nobubi ohlangothini lukaRamiro. Ngenxa yalokho, uSira uzithola eshiywe eNyakatho-ntshonalanga ye-Afrika futhi ebanjwa inkunzi yile ndoda edumile (kanye nezikweletu).
Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi ...
USira ukwazile ukunqoba yize kunezimo ezinzima; Unquma ukuqala kabusha ukuhweba kwakhe njengomthungi ukuze aphile, futhi aze athandane futhi. Ngaleyo ndlela, yena Uba ngumngane wamakhasimende amaningana… Lobo bungani obusha obuhlobene nezepolitiki phakathi kwesimo esinjengempi sobukhulu obukhulu siveza ushintsho olukhulu lwemicimbi.
Kamuva, uSira Quiroga unquma ukusebenza njengenhloli yamabutho ahlangene futhi abambe iqhaza ngendlela ebalulekile emicimbini yeMpi Yesibili Yomhlaba. Yize ekugcineni kokulandisa kusobala ukuthi umlingiswa ophambili ufuna kuphela ukuhlala ngokuthula, ubudlova obuningi bumlindele lapho eya khona. Kodwa-ke, le micimbi ichazwe ku Sira, ingxenye yesibili ye- Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi (kukhishwe ngo-Ephreli 2021).
Ukuhlaziywa kuvuliwe Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi
Inoveli eyiqiniso yomlando
Kule ncwadi, umbhali uyabheka iphrojekthi yemibhalo yokuvelela, engenakwenzeka ukubalwa kancane ezinkomba zomlando ezicatshangelwayo. Ngenxa yalokho, ukufakwa kwabalingiswa bangempela nemicimbi eyenzeka ngawo-30 eSpain ibalulekile ekulandiseni.
Ngaphezu kwalokhu -ngokuhlangenwe nakho komuntu ophambili-, U-Dueñas uchaza ngobuciko umongo weMpi Yezwe Yesibili. Ngalokhu, umbhali usebenzisa izincazelo nezinkomba ezibonisa umbono wakhe ngempi ebaluleke kakhulu emlandweni wesintu. Lapho inhloso ukugcina inhlekelele yempi ifihlekile enkumbulweni yomfundi.
Ingqikithi ebalulekile kule noveli
Ngokusobala, lapho ubhekene nenoveli yomlando, akunakwenzeka ukuthi unganikezeli ukubaluleka okubalulekile kumongo lapho imicimbi ilandiswa khona. Ngakho-ke, Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi kugcina umfundi elandela impilo kaSira Quiroga, ngenkathi ekhombisa ukubuka kwempi. Ngamanye amagama, indikimba yempi esesimweni somuntu iqhuba yonke indaba.
Ngaphezu kwalokho, i-protagonist - ngaphansi kwegama lekhodi u-Arish Agoriuq - iba yingxenye eyinhloko yobunhloli bamaNgisi phakathi neMpi Yezwe II. Ngokufana, izici eziyinkimbinkimbi zamasu empi ziyavezwa ezidlula inhlekelele engenakugwemeka. Ngaphezu kwalokho, indlela eya eMpini Yombango yaseSpain ichaza ukuthi indawo yezenhlalo yaba kanjani ngenxa yengxabano.
Ukwamukelwa okuhle kakhulu komphakathi kanye nenqwaba yezibuyekezo ezinhle kwaholela Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi yalethwa esikrinini esincane. Ngokwalesi sizathu, Ngo-2013, isiteshi sethelevishini i-Antena 3 saqopha uchungechunge lwegama elifanayo eselineziqephu eziyi-17 kuze kube manje. futhi useqoqe imiklomelo eminingi.
Futhi, Uchungechunge lunabalingisi bamazwe aphesheya abaholwa ngabadlali besimo sika-Adriana Ugarte, UPeter Víves noHanna New, phakathi kwabanye. Isiqephu ngasinye sochungechunge sidinge isabelomali esimaphakathi sama-euro ayizigidi eziyisigidi, ikakhulukazi ngenxa yezilungiselelo zesikhathi nezingubo.
Kunoma ikuphi, bekuyimali esetshenziswe kahle kakhulu, ngoba amazinga okubukwa kwesizini yokuqala awazange ehle abe ngaphansi kuka-11%. Kubandakanya, isiqephu seshumi nanye, "Emuva izolo", sibonwe ngababukeli ababalelwa ezigidini ezi-5,5 (Ama-27,8% avulwe ngoJanuwari 20, 2014).
Ekugcineni, ngokwethulwa kwe- Sira (2021) UMaría Dueñas uvule umnyango wokulethwa okuningi okulingisa uSira Quiroga - U-Arish Agoriuq. Njengoba kunikezwe ukuthandwa nezinombolo zentengiso ezitholwe esikrinini esincane, izethameli ezikhuluma iSpanishi ngeke zimangale uma iziqephu ezintsha zalolu chungechunge zivela.
Mayelana nomlobi, uMaría Dueñas
Unguthisha nombhali waseSpain owazalwa ngo-1964, ePuertollano, esifundazweni saseCiudad Real, eSpain. Ngaphambi kokuqala umsebenzi wakho wokubhala, Abanikazi Wenza impilo yokufunda ekufundiseni iminyaka engaphezu kwamashumi amabili e-University of Murcia. Ngokufanayo, owesifazane wasePuerto Rican uneziqu zobudokotela kwi-English Philology futhi ubenemisebenzi eyaziwayo yamasiko nocwaningo esizweni sase-Iberia.
Njengamanje, uMaría Dueñas uhlala eCagagena, ushade noprofesa waseyunivesithi futhi unezingane ezimbili. Ngokufana, kugqamisa umsebenzi wobuhlakani owafika nokushicilelwa kwenoveli yakhe yokuqala ngo-2009: Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi. Ngenxa yalokhu, yaduma kulo lonke elaseYurophu kanye nengxenye yomhlaba wonke.
Umthelela we Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi
Le noveli yaba yincwadi ethengiswa kakhulu kunazo zonke, yahunyushelwa ezilimini ezicishe zibe ngamashumi amane yaphenduka uchungechunge lwethelevishini ngesiteshi i-Antena 3. Ngendlela efanayo, ngenxa yalesi sihloko uDieñas wathola imihlobiso eminingana. Phakathi kwabo, iDolobha laseCagagena Prize for Historical Novels (2010) kanye ne-Culture Prize 2011 (isigaba sezincwadi) seDolobha laseMadrid.
Ngemuva kweminyaka eyishumi nambili ishicilelwa, Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi iqoqa ukuthengisa okungaphezu kwezigidi ezinhlanu emhlabeni jikelele. Kepha, sengathi lokhu bekunganele, le noveli ishicilelwe okungenani izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa kulo lonke elaseYurophu nakwezinye izindawo emhlabeni.
Ezinye izincwadi zikaMaría Dueñas
Ukuthandwa kwe Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi isetshenziswe ngumbhali waseSpain ukukhuthaza izincwadi zakhe ezilandelayo ezibhaliwe. Okuningi, ngokungangabazeki, Might Khohlwa (2012), Ubumnene (2015) futhi Amadodakazi kaKaputeni (2018)Zinobuhle bazo obuthile futhi zakhiwe kahle. Empeleni, Might Khohlwa y Ubumnene zibuye zaguqulelwa ithelevishini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi